Ibsa Irreecha Hora Finfinee irratti kenname ilaalchisee waa takkaa lama… – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooIbsa Irreecha Hora Finfinee irratti kenname ilaalchisee waa takkaa lama…
Iddoowwan Irreecha Hora Finfinneetiif akka oolan karoora kaartaa magaalichaa keessatti akka hammataman taasifaman jedhan qabatamaan eessaa hanga eessaa kanneen jiranii dha?
Bakki Irreechi Hora Finfinnee bara baraan itti kabajamu kun ummata Oromootiif dachee eebbaa (sacred ground) waan ta’eef, itti gaafatamummaa lafa kana wal’aanuun, bulchuun, kunuunsuufii misoomsuun (responsibility to rehabilitating, managing, developing the sacred land) qaama beekamu tokkoof kennamuu akka qabu falmisiisaa miti. Qaamni itti-gaafatumummaan akkanaa kunniin kennamuufii qabu eennu ta’uu qabaree?
Bakki Irreechi Hora Finfinnee itti irreeffatamu kun akkuma seenaa keessatti godhamaa ture sanatti gubbaadhaan duubbee ECA irraa kaasee yaa’a lagaa (river bank) qabatee bu’uudhaan dakaan ammoo paarkii Ambaasaaddariin akka daangeffamu taasisuu barbaachisa. Haaluma kanaan bakkeewwan dheerina diyaameetira lafa kanaa keessatti arkaman kanneen akka National Hotel, Ghion Hotel, gamoolee mootummaafii kanneen dhuunfaa hoteela Ghion irraa gara laga gamanaanirratti argaman, Finfinnee hot spring water bar and restaurant, Harambe Hotel fii Ambassador park lafa eebbaa Irreecha Hora Finfinnee ta’uudhaan karoora kaartaa magaala jedhame keessatti akka daangeffaman godhuu.
Itti-gaafatamummaan lafa Irreecha Hora Finfinnee kana deebisanii wal’aanuu, bulchuufii misoomsuun qaama mootummaatiif osoo hin taane, mana maree gumii Abbootii Gadaatiif akka kennamu godhuu. Hoteelotaafii gamoowwan qabeenya mootummaa ta’an (fakkeenyaaf Finfinnee hot spring water bar and restaurant, Ambassador Park) fii kanneen bakkeewwan kunniin irratti arkaman bilaashaan, kan abbaan qabeenyummaa isaanii kan dhuunfaa ta’an (fakkeenyaaf National Hotel) ammoo beenyaa kaffaluudhaan akka lafa Irreechi Hora Finfinnee irratti irreeffatamu keessatti daangeffaman godhuu. Qabeenyi gamoolee dhuunfaa kanniinif akka beenyaatitti kaffalamu kun, ummanni Oromoo Oromiyaa guutuurraa qarshii akka walitti buusuu irratti hojjachuudhaan horii sassaabuun ni danda’ama. Kana godhuun dabalataanis tokkummaan ummata Oromoo daran akka ititu gochuurratti faayidaa mataasaa ni argamsiisa.
Keessummaa OMN: Gaaffiif Deebii Dr. Moggaa Firrisaa Faana Taasifame Kutaa 1ffaa
Ethiopian Regime creates deliberate famine and misery in Wollaga zone of Oromia
Yaa Hummata keenya kan Irrecha Burqa Finfinnee ykn Shaggar dhaquf qophi irra jirtan, Baga kanaan isnin gahe, baga kanaan nugahe. Qabso keenyaan Bilisummaas akka goonfannu shakkiin hinjiru!. Guungumnii, xixxixuun Warraa biyya keenya irratti nujibbuu, hamma xurii qeensattii hin-makinaa ykn hin-lakkahinaa. “Utum gunguumtuu sagal sirraa dhalchee,” jedhe Oromtichi yommuu makmaaku. “Mortuun otoo mortuu, Hortuun hortii,” jedha Oromoon makmaksa isaa kessatti.
Garuu, yommuu irressa adeemtan, of-eegannoo cimaa godhu qabdu. Nageenya kessan tiksuu fi wal-tiksuu birattis yommuu nyaataa fi dhugaattii bitattan of-eggannoo godhaa. Akka abbotii keenya durii yommuu duula dhaqan sun, Galaa kessan guduunfadhaa adeemaa. Cubbutoo, Qixxaa, Daaboo, Daabo-qoloo, Qorsoddomee, Dhodhooboo, Cuukkoo ykn Micirraa fi kkf. Bishaan bitattanii dhugdanii fi nyaata bitattanii nyaattan abba ammantan irraa qofa ta’uu qaba. The Irrechaa Orgianizing Comittee and the City adminsistration of Finfinne should allow only ‘Approved Vendors’ to sell food and drinks on the streets of finfinnee and environs during the weeks of Irrecha. Remember what happened to OLA encamped in XOLAY and our kids in General Taddese Birru elementary school in Finfinne. No one was accountable for that criminal act of mass posisoning.
Tokkuman keenya yomiyyuu hin-laafuu!
Ayyaan Garriin isinif hawwaa